लेजर र आईपीएल कपाल हटाउन बीच के भिन्नता छ? （PartⅡ） -टेक्निकल जानकारी - शेन्जेन नोबल स्मार्ट निर्माण प्रौद्योगिकी कम्पनी लिमिटेड
लेजर र आईपीएल कपाल हटाउन बीच के भिन्नता छ? （PartⅡ）
समय: 2019-12-12 हिट्स: 95
आईपीएल वा लेजर, कुन राम्रो छ?
आईपीएल र लेजर उपचार बीच छनौट एक व्यक्तिगत निर्णय हो। तपाईंको छालाको टोन र कपालको र्गले तपाईं लेजर र कपाल हटाउने दुबैका साथ प्राप्त गर्ने परिणामहरूलाई असर गर्न सक्दछ, त्यसैले यो तपाईंलाई महत्त्वपूर्ण छ जुन तपाईंको लागि उत्तम हो भनेर बुझ्नु महत्त्वपूर्ण छ, त्यसैले तपाईं आफूले चाहेको नतिजा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंले आफ्नो छाला र शरीरको प्रकार र तपाईंले खर्च गर्न चाहानु भएको र तपाईंले कति चाँडो परिणामहरू हेर्न चाहानुहुन्छ विचार गर्नुपर्छ।
आईपीएल कपाल हटाउने को फाइदा
जसरी ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रकाश स्वाभाविक रूपमा फैलिन्छ, आईपीएल कपाल हटाउने उपकरणहरूको कभरेज लेजर कपाल हटाउने उपकरणहरू भन्दा बढी हुन्छ। त्यसकारण यसको मतलब यो हुन सक्छ कि उपचारको समय छिटो हुन सक्छ किनकि ठूला क्षेत्रहरू एकै पटकमा उपचार गर्न सकिन्छ। साथ साथै उपचारको समय द्रुत हुनुमा, तीनिहरू सस्तो पनि हुन सक्छ, तर तपाइँले समान परिणामहरू प्राप्त गर्न बढी सत्रहरू आवश्यक पर्न सक्नुहुनेछ।
आईपीएलले प्रकाशको बृहत्तर स्पेक्ट्रम प्रयोग गर्दछ, यसको मतलब यसले विभिन्न प्रयोगहरू गर्न सक्दछ। यो धेरै सफलतापूर्वक विभिन्न छाला शर्तों को एक बिरामी उपचार गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। विशेष प्रकारको छाला र कपालको प्रकारलाई एक उपचार प्रकार भित्र मिल्न यो विशेष गरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि, VPL भनिने आईपीएलको भिन्नता, जुन भेरिएबल पल्सिड लाइटको लागि खडा हुन्छ, विकसित गरिएको छ। VPL ले प्रयोगकर्तालाई लाइट पल्सको सेटिंग्स परिमार्जन गर्न सक्षम गर्दछ छाला र कपालको उपचारको लागि उनीहरूले उत्तम अनुरुप। यसको कारण विकासकर्ताहरूले यो बुझेका हुन्छन् कि हल्का-आधारित कपाल हटाउने उपकरणहरूको लागि मात्र विभिन्न छालाको टोनको बिभिन्न आवश्यकताहरू हुन्छन् र ती बाक्लो, पाठ्यक्रम बिकिनी लाइन कपाल पातलो हात कपालमा फरक उपचारको आवश्यक पर्दछ।
लेजर कपाल हटाउने को लाभ
लेजरहरूको प्रकृति भनेको लेजर कपाल हटाउने उपकरणहरूले छालाको प्ोरर्समा हल्का ध्यान केन्द्रित गर्न सक्दछ, यसको उपचारको लागि फोलिकल नजिक जान र अन्ततः पुनग्रोह रोक्न। यसको मतलब लेजर कपाल हटाउन आईपीएल भन्दा धेरै छिटो परिणामहरू प्राप्त गर्न सक्छ किनभने एकल कपाल हानिकारक तापक्रम द्रुतमा तातो हुन्छ। त्यसकारण, तपाइँले उही परिणामहरू प्राप्त गर्न लेजर कपाल हटाउने थोरै उपचारको आवश्यक पर्दछ।
अधिक विशिष्ट हुनुको मतलब लेजर कपाल हटाउन कालो छाला भएका मानिसहरुलाई बढी उपयुक्त हुन्छ। यो किनभने गाढा छालाले पनि पिलर छाला भन्दा बढी प्रकाश अवशोषित गर्दछ किनकि यसमा रहेको मेलानिन (पिग्मेन्ट) को मात्राको कारण, गाढा कपालले पिलर कपालहरू भन्दा बढी प्रकाश अवशोषित गर्दछ। तसर्थ, त्यहाँ एक जोखिम छ कि कालो छाला तताउन सकिन्छ। लेजरहरूको प्रकृति अधिक केन्द्रित हुनु, प्रकाशको साना क्षेत्रहरूको अर्थ तिनीहरू गाढा छालाका मानिसहरूसँग उपचार गर्न बढी उपयुक्त छन् किनकि उनीहरूले आईपीएलको तुलनामा जलेको जोखिमलाई कम गर्दछन्। त्यसो भए पछि, केहि आईपीएल प्रणाली अझै गाढा छालामा प्रयोग गर्न उपयुक्त छन्।
अनुहारको लागि आईपीएल र लेजर प्रयोग गर्दै
दुबै लेजर र आईपीएल कपाल हटाउने प्रविधिहरू जुन महिला अनुहारमा प्रयोगको लागि उपयुक्त छन्। जे होस्, न त स्कल्प वा आइब्रोमा प्रयोग गरिनु पर्छ। तिनीहरू गालाको रेखा मुनि राख्न उदाहरणका लागि माथिल्लो ओठ वा चिनमा सुरक्षित छन्, तर आँखाको नजीकमा प्रयोग गर्नु हुँदैन किनकि प्रकाशको चमकले तपाईंको दृष्टि बिगार्न सक्छ। यस कारणका लागि, पर्याप्त आँखा सुरक्षा प्रयोग गर्नु महत्त्वपूर्ण छ जब तपाईं आईपीएल वा लेजर कपाल हटाउनुहुन्छ, तपाईं आफ्नो अनुहारको उपचार गर्नुहुन्न भने पनि। केहि घरको किटहरू आँखा सुरक्षा समावेश सहित आउँदछन्, तर यदि ती तपाईं सस्तोमा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। यो पनि महत्त्वपूर्ण छ कि तपाई सिधा प्रकाश स्रोतमा हेर्नुहुन्न।
आईपीएल र लेजर कपाल हटाउने साइड इफेक्टहरू
दुबै आईपीएल र लेजर कपाल हटाउने विधिहरूको समान साइड इफेक्टहरू छन्। तपाइँले छालाको जलनको आशा गर्न सक्नुहुन्छ जुन लालिमा, सूजन, खुजली वा कोमल भावनाको रूपमा हुन सक्छ। जे होस्, यो सामान्यतया छोटो समयको हुन्छ र एक दिन भन्दा बढि हुँदैन। केवल छालाको जलनको उपचार गर्नुहोस् जस्तो तपाई सनबर्न र यसलाई मॉइस्चराइज राख्नुहुन्छ।
दुबै तरिकाहरू पछि छाला सूर्यको प्रकाशमा बढी संवेदनशील हुनेछ, त्यसैले यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईंले उपचारको अघि र पछाडि छालामा पर्याप्त सूर्य सुरक्षा प्रयोग गर्नुहुनेछ। यो अझ महत्त्वपूर्ण छ कि तपाई छालालाई कोर्नु हुँदैन किनभने यो अधिक नाजुक हुन सक्छ र तपाईले छाला सफा राख्न संक्रमणलाई रोक्न सक्नुहुन्छ।
आईपीएल र लेजर कपाल हटाउने वरिपरि कति लामो समय भयो?
शैक्षिक साहित्यमा लिपिबद्ध आईपीएलको पहिलो प्रयोग १ 1997 XNUMX in मा गरिएको एउटा अध्ययनमा भयो, जहाँ कपाल झर्नु आईपीएलको साथ छाला उपचारको साइड इफेक्ट हो। यस अध्ययनले फोटोडर्म VL नामको आईपीएल उपकरण प्रयोग गर्‍यो र अनुहार पोर्ट वाइन दागहरू (बर्थमार्क) लाई उपचार गर्‍यो। अन्वेषकहरूले पत्ता लगाए कि घावहरूले पहिलो उपचारको लागि राम्रो प्रतिक्रिया देखायो र चौथो पछि पूर्ण रूपमा सफा भयो। यस अध्ययनको लगत्तै पछि, लेखकहरूले अनुहारको कपाल स्थायी रूपमा हटाउने दुई घटनाहरू प्रकाशित गरे। उही लेखकले एक लेख पनि प्रकाशित गरे जसले सफलतापूर्वक आईपीएल प्रयोग गरी अत्यावश्यक तेलंग्याक्टियासियस (ईटीई) को उपचार गर्न प्रयोग गर्‍यो, जुन अर्को छालाको अवस्था हो। त्यसबेलादेखि यस टेक्नोलोजीमा बृहत सुधार भएको छ र परिणामस्वरूप अधिक शक्तिशाली र अनुमान गर्न सकिने आईपीएल उपकरणहरू सिर्जना भएको छ।
अर्कोतर्फ, लेजर कपाल हटाउने काम १ 1960 .० मा सबैभन्दा पहिले विकसित भएको थियो। प्रारम्भिक डिजाइनहरू दुर्भाग्यवश ढिलो थियो र यसको परिणामस्वरूप आगो भयो, तर प्रविधिले द्रुत गतिमा अघि बढ्यो, १ removal in1964 मा कपाल हटाउनको लागि पहिलो एफडीए-क्लियर लेजर उपलब्ध भएपछि।
अघिल्लो: लेजर र आईपीएल कपाल हटाउन बीच के भिन्नता छ? （PartⅠ）
अर्को: इलेक्ट्रोलिसिस कपाल हटाउने